Akhri: Hogaamiyaha Woqooyiga Kuuriya oo ciyaar ciyaar u dilaya dadkiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Hogaamiyaha Woqooyiga Kuuriya oo ciyaar ciyaar u dilaya dadkiisa
3rd November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Wargeyska “Daily Mail” ee kasoo baxa dalka Biritain ayaa qoray in hogaamiyaha da’da yar ee woqooyiga Kuuriya, Kim Jong Un uu amray in la toogto sarkaal sare oo ka tirsan milateriga dalkaas, kaasoo badelay Heesta Qaranka waddankaas Shuuciga ah ee uu ku amar ku taagleeyo wiilkaan yar ee jeegada xiirta.
Sarkaalka lka dlay oo heesahey ayaa badelay erayada ku jira heesta Calanka Woqooyiga Kuuriya ee macnahooda yahay “Thanks to our party,” “Xisbigeena ayaa mahadsan”, wuxuuna ku badleay erayada macanahoodu yahay “Thanks to your party,” “Xisbigaaga ayaa mahadsan”.
Sidoo kale, sarkaalka dhegta markii dambe dhiiga loo daray ayaa lagu eedeeyey inuu badelaya erayada kale ee ku jira heesta Qaranka Kuuriyada Woqooyi ee ah “Hate your enemy and I love your country”, “Necbow cadawgaaga”, wuxuuna ku badelay “Hate your wife and I love your girlfriend,” “Necbow xaaskaaga ee ee jeclaaw gabadha saaxiibtaa ah”.
Kim Jong Un ayaa sheegay in sarkaalka qaabkaas u heesay uu mucaarad weyn ku yahay maamulkiisa, wuxuuna faray in la soo xiro maalin kadib markii uu sidaas u heesay, waana la toogtay.
Hogaamiyaha keli teliska ee Waqooyi Kuuriya, Kim Jong-un ayaa horay u amray in la daldalo adeerkiis oo la oran jiray Jeneraal Jang Song Thaek.
Jang Song Thaek ayaa ahaa Taliyaha Labaad ee Guddiga Difaaca wadankaasi, wuxuuna qabay hogaamiyaha Kim Jong Un eedadiis oo lagu magacaabo Kim Kyong-hui.
Taliyahan la dilay ayaa lagu tilmaami jiray innuu ahaa ninka labaad ee ugu awooda badan dalkaasi, waxaana lagu eedeeyey inuu qorsheenayey Afgembi lagu sameeyo hogaamiyaha xilka haya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo dacweeyey danjire Nicholas Kay
SCYNEXIS, Inc. Enters Into Worldwide Agreement With Waterstone Pharmaceutical for the Development and Commercialization of SCY-635 for Viral Diseases